ह्वाट्सएप नम्बर परिवर्तन गर्दा कसरी सार्ने पुराना डाटा ? – Subas Niraula
नेपाली Unicode Converter
ह्वाट्सएप नम्बर परिवर्तन गर्दा कसरी सार्ने पुराना डाटा ?
Published by Subas Niraula on December 31, 2018
विश्वमा करोडौं स्मार्टफोन प्रयोगकर्ताहरु ह्वाट्सएप प्रयोग गर्छन् । धेरै प्रयोगकर्ताहरु लामो समयसम्म एउटै ह्वाट्सएप नम्बर प्रयोग गर्छन् । तर, कहिलेकाहीँ केही कारणले आफ्ना पुरानो ह्वाट्सएप नम्बर परिवर्तन गर्न चाहन्छन् । यसरी नम्बर परिवर्तन गर्दा पुरानो ह्वाट्सएप नम्बरमा रहेका सबै रेकर्ड, च्याट, मेसेज तथा ग्रुपहरु डिलिट हुन्छन् ।
ह्वाट्सएप नम्बर परिवर्तन गर्दा पुरानो नम्बरका डाटाहरु नमेटिउन् र जस्ताको तस्तै नयाँमा सरुन् भन्ने चाहनुहुन्छ ? यदि एक उपाय अपनाउनुभयो भने त्यो सम्भव हुनेछ ।
यसका लागि पुरानो ह्वाट्सएप नम्बर बदल्न तपाईं Change Number फिचर प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ । यस फिचरको सहयोगले तपाईं आफ्नो ह्वाट्सएप अकाउन्टका जानकारी, ग्रुप तथा सेटिंग्सलाई पुरानो नम्बरबाट नयाँमा सार्न सक्नुहुन्छ ।
यसबाट पुरानो फोन नम्बरको ह्वाट्सएप अकाउन्ट डिलिट हुन्छ । प्रयोगकर्ताले आफ्नो ह्वाट्सएप कन्ट्याक्ट लिस्टमा आफ्नो पुरानो नम्बरको अकाउन्ट देख्दैनन् । नयाँ नम्बरवाला अकाउन्टमै च्याट हिस्ट्रीलगायतका डाटा प्राप्त गर्न सकिन्छ ।
ह्वाट्सएपको Change Number फिचर प्रयोग गर्नका लागि सबैभन्दा पहिले आफ्नो नयाँ फोन नम्बरमा कल तथा एसएमएस र डाटा कनेक्सन वा वाईफाई कनेक्सन हुनुपर्दछ । ह्वाट्सएपमा पुरानो नम्बर भेरिफाइड हुनुपर्दछ । त्यसपछि ह्वाट्सएपको मेन्यू बटनमा क्लिक गरी Settings मा गई आफ्नो प्रोफाइल फोटोमा ट्याप गरिसकेपछि आफ्नो भेरिफाइड नम्बर थाहा पाउन सकिन्छ ।
अब टप बक्समा आफ्नो पुरानो फोन नम्बर हाल्नुहोस् । त्यसपछि बटम बक्समा आफ्नो नयाँ फोन नम्बर हाल्नुहोस् । अनि स्क्रिनको माथिल्लो भागमा रहेको म्यलभ मा ट्याप गर्नुपर्दछ ।
त्यसपछि नयाँ ह्वाट्सएप नम्बर भेरिफाइ गर्नुपर्दछ । अनि नयाँ नम्बरबाट ह्वाट्सएप प्रयोग गर्न सकिन्छ । जहाँ पुरानो नम्बरमा भएका सबै डाटाहरु नयाँ नम्बरमा सरेका हुन्छन् ।
Tags: how to get back old data after number change in whatsapphow to get back old data in whatsappnumber change in whatsappह्वाट्सएप नम्बर परिवर्तन गर्दा कसरी सार्ने पुराना डाटा ?
Tweets by SubasNiraula
फेसबुक अकाउन्ट सुरक्षित पार्ने केही टिप्स
फेसबुक विश्वको सबैभन्दा लोकप्रिय सोसल नेटवर्किङ्ग प्लाटफर्म हो । विश्वका करोडौँ मानिसहरु फेसबुकको माध्यमबाट आफ्ना साथी तथा परिवारसँग जोडिइरहेका छन् । तथापि पछिल्लो केही समय यता डाटा लिक तथा ह्याकिङ्गका घटनाले फेसबुकको सेक्योरिटी तथा प्राइभेसी Read more…
कहिँ तपाहिले त एस्तो पासवर्ड प्रयोग गर्नुभएको छैन ? | यी हुन् विश्वका सबैभन्दा कमजोर पासवर्ड
सन् २०१८ मा सबैभन्दा धेरै ह्याक भएका वा सर्वाधिक कमजोर पासवर्डको खुलासा भएको छ । वर्षको सबैभन्दा कमजोर पासवर्डको सूचिमा १२३४५६ सबैभन्दा अगाडि रहेको छ । १२३४५ सबैभन्दा कमजोर पासवर्डको पहिलो स्थानमा रहेको यो लगातार पाँचौँ Read more…
How Secure is your WiFi Router? | वाइफाइ राउटर कति सुरक्षित ?
हामीले नयाँ वाइफाइ राउटर किन्दा कहिले पनि शक्तिशाली नेटवर्क सुरक्षाबारे ध्यान दिँदैनौं । खासगरी घरमा जोड्ने राउटर भनेपछि हामी केवल त्यसको स्पिड र कभर गर्ने एरियाका बारेमात्रै ध्यान दिन्छौं ।अब भने हामीले आफ्नो सोचमा परिवर्तन गर्ने बेला Read more…
Copyright © 2019 Subas Niraula | Powered By: SN Digital